Izindaba - Amasudi ezemidlalo amasudi wabesilisa nabesifazane
Amathrendi ezemidlalo wabesilisa nabesifazane
Izinto zesudi yezemidlalo yamadoda neyabesifazane zango-2022 zathonywa yi-pragmatism, futhi zizonaka kakhulu isitayela semfashini futhi zingagqokwa kaningi; kugqugquzelwe izinto zesudi yezemidlalo embukisweni wesizini entsha ka-2021 wasekwindla nasebusika, bamba ujule ochungechungeni oluhlukahlukene lwemidlalo yezemfashini ama-silhouettes amasudi. Amasudi okuqina afakiwe angagqokwa kaningi. Idizayini etholakalayo eguquguqukayo namasudi okusika imfashini yandisa umuzwa wamakhasimende wokuzivumelanisa nezimo ngenkathi uswakeme ngokwengeziwe; ubukhazikhazi be-velvet nezindwangu ze-sequin kuveza ukuthungwa okunethezeka kwezemidlalo yemfashini. Isudi yasekhaya entofontofo iqinisekisa induduzo ngokungeza imiklamo eningiliziwe kanye nezinguquko zephrofayili ukuhlangabezana nezidingo nokusebenziseka kokugqokwa kwezigcawu eziningi; ukuvela kwamasudi e-retro kwehluka kakhulu futhi kunamandla kuphrofayili, kuletha okuningi ku-retro ekuphefumulelweni kwe-90s Design.
Zonke izinhlobo zamasudi ezemidlalo asezemfashinini acwengisiswe embukisweni wakamuva ekwindla nasebusika ka-2021. Kunamasudi ezemidlalo ahlukahlukene njengesitayela sobuchwepheshe besikhathi esizayo, isitayela esipholile sokusebenza, ukuthambekela komgwaqo ophakeme nemfashini ye-retro; ngezansi, sizoklelisa izinhlobo eziningana zezemidlalo ngokuningiliziwe ngokusekelwe ku-silhouette. Ukuhlaziywa okujulile kwamasudi kuzohlinzeka ngogqozi kubaqambi lokuthuthukisa amasudi ezemidlalo emfashini angaphambi kokwindla ka-2022.
Ukuthungwa okugqokiwe nokugqoka kuyizindlela ezintsha ekuqaleni kwekwindla ka-2022, ezisetshenziselwa amasudi ezemidlalo asemfashinini ukwengeza okuvelele; ngemuva kokuqina kwangaphakathi, ungafaka ngqo izikibha ezimfishane noma amabhantshi okwezingubo zangaphansi zezemidlalo ukuze ugweme amahloni okuba nqunu kakhulu ngasikhathi sinye, kwandisa ubuhle futhi kufinyelele ekusebenzeni kokushintsha phakathi kwezigcawu eziningi engutsheni eyodwa. Lolu hlobo lwesudi ludinga ukunakekelwa ekwindla yokuqala yango-2022.
Indlela yokuklama etholakalayo iyindlela entsha ekuqaleni kwekwindla ka-2022. Iyaguquguquka futhi itholakale ngaphansi kolawulo lwabathengi, evumelana nokulawulwa kwamazinga okushisa, ukulawulwa kobuhle nokwanda okungenzeka komkhiqizo owodwa; njengokuqaliswa kwakamuva kwe-Adidas ngenkathi entsha ka-2021 ne-American diva. Iphethini ezacile ochungechungeni oluhlanganyelwe inokuthungwa okuguqukayo nokutholaka okhalweni nasesiphethweni, okungaguqula ubude baphansi ngisho nomphetho ohlukanisiwe ungasetshenziswa njengesikhafu semfashini, uqaphela ukuthi kungenzeka ugqoke imilo eminingi engutsheni eyodwa ; Esikhungweni semikhono, ukwelashwa okutholakalayo komlenze ohlangene wendololwane kungafinyelela ukuhlangana kokusebenziseka nobuhle bokuhlobisa.
Inqubo yokusika ishiwo kaningi ezimpahleni zokulungela ukugqoka nezemidlalo. Kule sizini, kugxilwe kunqubo yokusika yesudi efanayo yombala; ukusika izindwangu zikakotini eziqiwe kancane noma zemihlobiso emise okwibhola ezinhlangothini zemikhono Kunobuciko. Okwesibili, ukuthungwa kombala okugqamile kuyashintsha emzimbeni webhulukwe ukukhulisa intshisekelo yabathengi ekudlaleni. Ngasikhathi sinye, amaphethini ombala ogqamile angenziwa kumeshi wangaphakathi ukuthuthukisa umuzwa wokuhlobisa.
Indwangu yokuthungwa kwe-velvet ikhipha ukucwebezela okuncane, okuletha ukunethezeka okukhanyayo ezingutsheni eziphelele. Kuhlanganiswe ne-silhouette ye-suit yezemidlalo, ithuthukisa ubuhle bemfashini ngesisekelo sokuqinisekisa ukunethezeka kwezemidlalo; okwesibili, indwangu ye-sequin nendwangu yokuthungwa kwe-corduroy ekhanyayo zombili zingukukhetha okuhle okuhle ngaphansi kwesitayela.
Amasudi asekhaya entofontofo esizini entsha anaka kakhulu ukuvela kwephrofayili nobuhle bemininingwane ngesisekelo sokuqinisekisa ukusebenza kwenduduzo. Umklamo oyihaba we-neckline, ukuhlobisa okhalweni nokusikwa kwemilenze yebhulukwe konke kuhumusha izidingo zobuhle basekhaya ekwindla yokuqala ka-2022. Kungasungulwa amasethi ahlukene aphezulu naphansi ukukhulisa umuzwa womsebenzi ekhaya.
Ukuzizwa kwe-retro kunendawo embukisweni wesizini entsha ka-2021 wasekwindla nasebusika. I-2022 yokuqala yasekwindla i-retro ezwa isudi yezemidlalo ichemile ekubhekeni ngokomqondo kwemifaniswano yesikole. Isudi ehlotshisiwe futhi ekhanyayo e-retro eluhlaza ehlotshisiwe ineza umuzwa oqabulayo futhi ogqamile ochungechungeni; ngasikhathi sinye, uchungechunge lwe-retro olubomvu noluhlaza okwesibhakabhaka Ukuthungwa nokuhlanganiswa kwewindow kwenza abantu bazizwe sengathi bakuma-90s; isudi ehlanganisa isiketi uhhafu nejakhethi esinqunyiwe iguqukele ebusheni kakhulu futhi inemfashini kuphrofayili.